SQUID App: iyo inogara iri nyowani nhau app kubva kuSweden kuenda kuSpain | Linux Vakapindwa muropa
SQUID App: iyo inogara iri nyowani nhau app kubva kuSweden kuenda kuSpain
SQUID App chishandiso icho chave kutowanikwa muSpain cheAroid, uye izvozve iwe unogona zvakare kumhanya pane yako yaunofarira GNULinux kugovera uchishandisa emulator yeGoogle inoshanda sisitimu, pamwe nezvimwe zvinowedzerwa zvewebhu mabhurawuza atakambotaura nezvazvo pawebhusaiti yedu, kana kuona Android x86 kuti ukwanise kuwana iyo Google Play Store kwaungaiwana.
Mushure mechinguva muchishanda mune dzimwe nyika, kubva kwayakatangira muStockholm, Sweden, uye kuwedzerwa kwayo kwapashure kuPoland, France, Italy uye neshanduro yayo yepasirese, izvozvi vagadziri vayo vanga vachida kuenda nhanho imwe kumberi nekubvumira dzimwe nyika senge España, Germany, Holland uye United Kingdom vanogona kunakidzwa nazvo. Uye sezvavanotaura kubva kune yepamutemo webhusaiti, iyi Anwendung inokutendera iwe kunyudza iwe mugungwa renhau kukuchengetedza iwe uchigara uchiziva.
Paunenge iwe waisa iyo SQUID app iwe yaunogona kusarudza zvikamu zvemashoko (panguva ipi neipi iwe unogona kuwedzera kana kubvisa iwo aunoda) ayo anokufadza uye anotendera iwe kuti utonge mapoka akawedzerwa enhau gare gare. Mashandiro ayo anosanganisira aya ekugovana nhau nechiratidzo chakapfava nekubata bhatani rekugovana, pamwe nekumisikidza kwenzvimbo inobatsira yenzvimbo, uye nhau dzinoverengwa zvinoenderana neboka radzo nematepi kuitira kuti nhau dzive pamwechete asi zviite kwete kupopota. Ehezve, ayo akanakisa interface iri muchiSpanish.
Kusiyana nedzimwe nzira dzekushandisa dzinokwikwidza neSQUID, mune ino unogona kugadzirisa zvinyorwa zvemashoko. Iyo maitiro ekugadzirisa Iwo andiri kureva kune akasiyana kubva pakadhirowa pambiru pachayo, kunyora zvinyorwa (senge zvirevo zvatinofunga kuti zvinonakidza), kuwedzera maemaikoni eakakurumbira octopus anoumba logo rekunyorera. Ehezve, iwe unogona kugovera ese epakutanga nhau uye neayo iwe aunosarudza nechero ipi yekutaurirana maapplication aunayo mune yako system ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SQUID App: iyo inogara iri nyowani nhau app kubva kuSweden kuenda kuSpain
FocusWriter uye Nyora!: Maviri akanaka maturusi ekugadzira ebook
Waya iyo nyowani nyowani kune WhatsApp yauya kuLinux